गाईजात्रासँग सम्बन्धित पर्व स्थगन गर्न गोदावरी नगरपालिकाको अनुरोध- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ११, २०७७ रासस
ललितपुर — गोदावरी नगरपालिकाले यही साउन २० गते श्रावण प्रतिपदाका दिन मनाइने गाईजात्रासँग सम्बन्धित अन्य पर्व पूर्णरुपमा स्थगन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीले संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नगरवासीको सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले उक्त अनुरोध गरेको हो ।
गोदावरीभित्र गाईजात्रा पर्वमा मनाइने मतया, रोपाइँ, लाखे, कृष्ण र जुग (भगवान) जात्रा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताए । उनले भने, 'दिवंगत आत्माको शान्त्तिका लागि भीडभाडजन्य कार्य नगरी सरोकारवालालाई मात्र गाईजात्रामा समावेश हुन अपिल गर्दछाै‌ं।' यस वर्ष सामाजिक दूरी कायम गरी सांस्कृतिक परम्परालाई मात्र सञ्चालन गर्न प्रमुख महर्जनले नगरवासीसमक्ष अपिल गरे ।
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ १२:४५
‘समाजको चेतना बुझ्न सकेका छैनौं’
सोच्नै नसक्ने कुराहरूमा पनि एकोहोरो गाली आइरहेको हुन्छ । गालीको के प्रतिक्रिया दिनु ? तथ्यगत आलोचना पो ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
श्रावण ११, २०७७ गोकर्ण गौतम
काठमाडौँ — कुनै समयमा नेपाली सिनेमाका लागि दयाहाङ राई बिल्कुलै ‘आउटसाइडर’ थिए । ‘लुट’ पछि चम्किएका यी अभिनेता फिल्म संख्या र सफलताका आधारमा अहिले नेपाली सिनेमाको मूलधारमा छन् । फिल्म निर्माणमा पनि संलग्न छन् ।
समाजका विविध आयाम र विकास क्रमबारे जानकार रहन्छन् । सीमान्तकृतको पक्षमा आवाज उठाउँछन् । कोरोना महाव्याधिमा राज्यको भूमिका, नेपाली सिनेवृत्तका विवाद र उनका व्यक्तिगत भोगाइको सेरोफेरोमा गोकर्ण गौतमले गरेको कुराकानी :
लकडाउन कसरी बित्यो ?
सुरुवातमा निकै आत्तिएँ, परिवारसँग बस्नेबाहेक केही गरिनँ । अलि दिनपछि भने मन परेका फिल्म दोहोर्‍याउन थालें, छुटेका केही फिल्म हेरें । पहिले र अहिले फिल्मलाई ग्रहण गर्ने तरिका फरक पाएँ । आफूले आफूलाई महसुस गर्न पाइयो ।
कोरोना महामारीमा सरकारको भूमिका कसरी हेर्नुहुन्छ ?
चीनबाट नेपाली ल्याएपछि सरकारप्रति आशावादी थिएँ, नागरिकप्रति गम्भीर रहेछ भन्ने लाग्यो । तर त्यसपछिको घटनाक्रमले उज्यालो हुन नपाउँदै अँध्यारो भएझैं भयो । भ्रष्टाचारका घटना बाहिरिए, गुणस्तररहित मेडिकल सामग्री ल्याइयो । जसरी सिनेमामा गज्जबको फिक्सन सिर्जना गरेर दर्शकलाई रनभुल्ल पारिन्छ, त्यसैगरी सरकारले फिक्सन सिर्जेर आमनागरिकलाई ठूलो भ्रममा राख्ने राजनीति गर्‍यो । भ्रष्टाचारलाई छोप्न अनेक हत्कण्डा ल्याइयो । राष्ट्रवाद प्रयोग गरियो । जबकि आफूलाई प्रमाणित गर्ने उत्तम अवसर थियो सरकारसँग । तर ठ्याक्कै उल्टो भयो, महामारीलाई झोला भर्ने मौकाका रूपमा प्रयोग गरिएको प्रस्ट देखियो । १० वर्षपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री को होलान् भन्ने चिन्ताले घरी–घरी सताउँछ ।
कलाकारमा समाजले सम्मान गरेन, बुझेन भन्ने गुनासो छ । यस्ता गतिविधिले झन् नकारात्मक माहोल सिर्जना गर्दैन र ?
समाजले हामीलाई बुझेन भन्ने कुरा म मान्दै मान्दिनँ । बरु सिनेमाका मात्र होइन, हरेक क्षेत्रका सेलिब्रेटीले समाजको चेतना बुझ्न सकेका छैनौं । तर आफ्नो दम्भ राखेर समाजले बुझेन भन्छौं ।
त्यसो हो भने खासगरी महिला कलाकारको सवालमा किन सामाजिक सञ्जालमा व्यापक गाली आउँछ ?
यसले चाहिँ समाजको चेतनास्तर देखाउँछ, हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं तर हाम्रो चेतनाको तह प्रगतिशील हुन सकेको छैन, अझै ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भनिरहेका हुन्छौं । छिटो फड्को मार्दा ‘ग्याप’ भएझैं लाग्छ । समाज र राजनीतिलाई सही ढंगले बुझ्न सकेनौं । फरक सोचको अस्तित्व स्विकार्न सक्दैनौं । महिलालाई त हाम्रो चेतनाले एउटा वस्तुभन्दा माथि लान सकेको छैन, वस्तुबाट त हरेक कोणबाट मज्जा लिने हो । यही कारण महिलामाथि ज्यादा आक्रमण भइरहेको हुन्छ, सिनेमा ‘शो बिज’ भएकाले झन् धेरै हुने रहेछ ।
तर यही आफ्नै सहकर्मीहरूमाथि ‘बुलिङ’ भइरहँदा खासगरी पुरुष कलाकारहरू किन बोल्दैनन् ? तपाईं किन बोल्नुहुन्न ?
मेरो क्षेत्रको मात्र नभई समग्र महिला, जात, रंगको विभेदमाथि बोलेको छु । कुनै समाचार वा आर्टिकल सेयर गरेको छु, बहस गरेको छु ।
तैपनि आफ्नो लोकप्रियता गुम्ने भयले चित्त नबुझेको विषयमा पनि प्रस्ट बोल्न सकिन्न हो ?
हो । सोच्नै नसक्ने कुराहरूमा पनि एकोहोरो गाली आइरहेको हुन्छ । गालीको के प्रतिक्रिया दिनु ? तथ्यगत आलोचना पो ग्रहण गर्न सकिन्छ । सँगसँगै म के पनि स्विकार्छु भने लोकप्रिय भएपछि सुरक्षित अवतरण खोजिँदोरहेछ ।
नेपाली सिनेमामा नातावाद छ ?
कहीं न कहीं छ । राजनीतिमै भएपछि समाजका हरेक क्षेत्रमा जस्तै सिनेमामा पनि हुन्छ । तर कुनै समय मैले ‘अभिनेता बन्छु’ भन्दा ‘अभिनेता बन्ने कोसिस नगर’ भन्थे । यो पनि विभेद हो । तर बलिउडमा जति हामीकहाँ नातावाद छैन ।
हिजो ‘आइटसाइडर’ हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेपाली सिनेमाको मूलधारमा हुनुहुन्छ । तपाईंमाथि पनि ‘ग्रुपिज्म’ गरेको आरोप छ नि ?
यो आरोपलाई बहसका लागि स्विकार्छु । मसँग मण्डला थिएटर र सिनेमा आर्टस् छ । यी दुई संस्था हामीभित्रको थोरै आक्रोश, थोरै विद्रोहले एकै समयमा जन्मिए । हामीले चित्तमा लागेको काम गर्दै गयौं । बिस्तारै मण्डलाका अभिनेताहरू स्थापित हुन थाले, सिनेमा आर्टस्ले बनाएका फिल्महरू सफल भए । यति हुँदा हुँदै ‘ग्रुपिज्म’ को बहस नहुँदो हो त हामी सचेत हुँदैन्थ्यौं होला । तर हाम्रो हकमा टिम निर्माण भएको हो, ग्रुप होइन । कसैलाई च्याप्ने वा कसैलाई बहिष्कार गर्ने नियत छैन ।
तपाईंलाई जनजाति समुदायले पनि च्यापेको भन्छन् । हङकङ, सिंगापुर, बेलायततिर डिमान्ड धेरै हुने भएकाले फिल्ममा लिइने आरोप छ नि ?
त्यसो हो भने, मलाई खुसी लाग्छ किनभने ती देशहरू पनि हाम्रो बजार हो । जनजाति समुदायले आफ्नो अनुहार, कथा र पीडा देख्ने भएकाले नै माया गर्ने हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अन्य समुदायबाट पनि अगाडि आउनुपर्छ । खासगरी मधेसका अनुहार, भावना र कथाहरू धेरै आउनुपर्छ ।
कलाकारले कम पारिश्रमिकमा अभिनय गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तपाईं घटाउने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
नढाँटी भन्दा कमाउनकै लागि बनाउने सिनेमामा बढी पारिश्रमिक लिने गर्छु, मैले पनि कमाउनुपर्‍यो भनेर । पारिश्रमिक निर्माताको नियतमा भर पर्छ । पात्र, विषय मन पर्दा सहकार्य गरेको छु । आगामी दिनमा पनि त्यस्तै हुन्छ ।
तपाईंको चाहिँ कति पारिश्रमिक उठ्न बाँकी छ ?
थुप्रै बाँकी छ । प्राविधिक र सहायक कलाकारसमेत पैसा पाएका हुँदैनन् । मैले सुरुवातमा खेलेका फिल्महरूबाट पनि पारिश्रमिक लिन बाँकी छ । निर्माताले लागेको पारिश्रमिक दिने हो । मेरो रेट तोक्ने होइन । श्रमको पैसा लिने हो । तर यहाँ बिकाउको पछाडि लागिन्छ ।
तपाईंका लागि महानायक को हो ?
यो अनौठो प्रश्न हो के । (केहीबेर सोचेर...) चलचित्रको कथाभित्रको प्रभावकारी पात्र त्यसको नायक हो । पर्दाबाहिर त अभिनय गर्ने अभिनेता मात्र हो । योचाहिँ ‘लुट’ पछि करिब स्थापित भएको छ । त्यसैले पहिले नायककै परिभाषा खोज्नुपर्छ । जसले जति योगदान दिनुभयो, उहाँहरूको कदर गर्ने नामहरू महा, उप हुँदै आए होला । यो चिज राख्नु नै सही थियो/थिएन ? तर दर्शकबाटै प्रेमका साथ आएको छ भने राम्रो हो । म यति मात्र भन्छु, जसरी हामी अभिनेतालाई नै नायकको परिभााषाभित्र अटाइएको छ, त्यो गलत हो ।
उस्तै र धेरै फिल्म खेलेकाले कतिपयले तपाईंलाई राजेश हमालकै पुनरावृत्ति भन्न थालेका छन् । तपाईंलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ?
लाग्छ । उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि, बौद्धिकता, व्यक्तित्वको हामी प्रशसंक हौं । लामो समय काम गरिरहनुभयो । यति हुँदाहुँदै सिनेमा मेकिङलाई लिड गरेर लानुहुन्थ्यो भन्ने धेरैको अपेक्षा पूरा भएन । मैले पनि सिनेमामा एक खालको सफलता पाएँ, त्यसमै रमाइरहे । अझैं रमाइरहेको छु । घरीघरी सुधार्ने मौका पाउँछु, प्रयास गर्छु । कति सफल भएँ, कति असफल । मप्रतिको अपेक्षा पूरा नभएकाले त्यो आरोप आउनु स्वाभाविक हो । तर, बाँकी कुनै हिसाबले मलाई उहाँ (राजेश हमाल) सँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
‘लुट’ पछि नेपाली सिनेमामा ‘न्यु वेभ’ आयो भनियो तर तपाईंसँगै सौगात मल्ल, निश्चल बस्नेतले त्यही अनुपातको स्तरीय कामलाई निरन्तरता दिन सक्नुभएन । त्यसैले नयाँ धार नै संकटमा परेको देखिन्छ । यो अपजसको भार कतिको बोक्नुहुन्छ ?
जस/अपजस पाउने ‘फ्रन्ट फेस’ मा अभिनेता हुन्छ तर अलि गहिरिएर हेर्‍यो भने निर्देशक हो । म निर्माता पनि भएँ तर अहिलेसम्म त्यस्तो फिल्म बनाउन सकेको छैन, जुन मैले बनाउनुपर्ने थियो । हामी आएपछि कति मात्र फरक भयो भने हामीले चरित्र निर्माण गर्‍यौं, चरित्रमा विविधता खोज्यौं । कथा, भावना, मुद्दा खोज्नेक्रम जारी छ । अहिल्यै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
तपाईंलाई काम गर्न मन लागेका निर्देशकहरू को–को छन् ?
दीपक रौनियार, मीन भाम, रामबाबु गुरुङ, निश्चल बस्नेतसँग दोहोर्‍याइ–दोहोर्‍याइ सहकार्य गर्न चाहन्छु । पछिल्लो पूजा गुरुङ र विभूषण बस्नेतले पनि राम्रो गर्न खोजिरहेका छन् ।
समकालीनमध्ये तपाईं कसको फ्यान हो ?
सौगात मल्ल । भलै उसले गरेका सबै कामहरू फेल भए होलान् तर व्यक्तिगत रूपमा उसले लगाएको ‘इफोर्ट’ कसैले धान्न सक्दैन । सौगात पटकथा चयनमा चुकेको होला तर उसलाई हामीले सही ढंगले निर्देशन गर्न नसकेको पनि सत्य हो ।
अभिनेता दयाहाङ राईका सबैभन्दा सबल र दुर्बल पक्ष के हुन् ?
राम्रोचाहिँ म सकेसम्म सबैतिर सचेत भएर अगाडि बढ्न खोज्छु । तर म कथा मन नपर्दा–नपर्दै पनि निर्देशकका अरू कुराले भावनामा बगेर छिट्टै ‘कन्भिन्स्ड’ भइदिन्छु । यो बानी सबैभन्दा झुर लाग्छ ।
तपाईंलाई आफू कति लोकप्रिय छु जस्तो लाग्छ ?
जब मान्छेको भीडमा पुग्छु, सारा मान्छे मेरो नाम सुन्नासाथ, देख्नासाथ ताली पिटिरहेका हुन्छन्, त्यो बेला लोकप्रिय छु जस्तो लाग्छ । एकैछिनमा त्यही भीडबाट कसैले सोधिदिन्छ, ‘तपाईंको नाम के हो ?’ त्यसबेला आफ्नो औकात थाहा पाइन्छ । हालैको एउटा घटना भन्छु । म बस्ने पुरानो बानेश्वरको टोलका साथीभाइसँग दुई महिना ब्याडमिन्टन खेलें । खेल्नेमध्ये एक जना दाइ र मेरो घर नजिकै छ । उहाँले मलाई जहिल्यै स्कुटरमा कोर्टसम्म लैजानुहुन्थ्यो । डेढ महिनापछि उहाँले सोध्नुभयो, ‘भाइ, के गर्छौ हाउ ?’
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ १२:१६